गोकुलसंग डिल गर्ने मिश्रले खोले यस्तो रहस्य, 'दुई महिनाअघि प्रधानमन्त्रीकहाँ अडियो पुर्‍याएको थिएँ' - Himali Patrika
गोकुलसंग डिल गर्ने मिश्रले खोले यस्तो रहस्य, ‘दुई महिनाअघि प्रधानमन्त्रीकहाँ अडियो पुर्‍याएको थिएँ’
हिमाली पत्रिका १० फाल्गुन २०७६, 5:06 am
विजय मिश्र, न्युज एजेन्सी अफ नेपाल
उनले सुरूमा स्विट्जरल्यान्डको प्रेससँग ‘डिल’ भए पनि पछि मन्त्री कमिसनको लोभमा अन्यत्र लागेको बताएका छन् । अडियो रेकर्डबारे मिश्रसँग कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
कतिमा ॅडिल’ थियो ?
५५/६० करोड वा त्यही सेरोफेरो मात्रै आउने भनेपछि मन्त्री बाँस्कोटाले २७ अर्बको ठाउँमा २८ अर्ब बनाएर ल्याऊ न त भनेका हुन् । उनले सांकेतिक रूपमा एक अर्ब रुपैयाँ बढाउँदा के फरक पर्छ र भनेका छन् ।
सुरुमा बाँस्कोटाले तपाईंलाई विश्वास गरेका रहेछन् ?
उनीहरूले स्विट्जरल्यान्डको कम्पनीसँग किन्ने भनी प्रक्रिया बढाउने बताए । सरकारले त्यहाँको कम्पनीलाई चिठी पठायो । बाँस्कोटाले यहाँको राजदूतलाई फोन गर्दा समय दिएनछन् । अनि मलाई फोन गरेर समय मिलाइदिनुपर्‍यो भनेर आग्रह गरे ।
त्यही क्रममा भेटेर कुरा गरौं भने । अनि म मन्त्रीको कार्यकक्षमा जाँदा संयोगले खिचिएको हो, खिच्छु भनेर योजनाबद्ध रूपमा खिचेको पनि हैन । भिडियो डेढ वर्षअघि खिचिएको हो । म खराब हुन्थें भने उतिबेलै सार्वजनिक गरिदिन्थें । मैले अहिले सही समयमा उठाएको भएर उनीहरू चुप लागेर बसेका छन् । अहिले आएर थाहा भयो, मन्त्री बाँस्कोटा बहुत फटाहा
मान्छे रहेछन् ।
अस्ति मलाई उनीहरूले मान्छे पठाए । बाँस्कोटाले ‘मलाई कसरी बचाउने हो बचाउ’ भनेका हुन् । पार नलागेपछि ‘त्यो मिश्रलाई कसरी ठिक पार्ने ?’ भन्ने उपाय सोच्न थाले । मलाई ‘केही पैसा लिएर चुप लाग न त’ भन्ने अफर पनि आएको हो । ‘मैले देश चलाउने अनि यसले मलाई चुनौती दिने ?’ भनेर पनि धम्की आएको थियो । मलाई सार्वजनिक लेखा समितिका एक सदस्य (नाम भनेनन्) ले दीपक भट्ट र सोनाम (यति समूहका सञ्चालक) सँग भेट्नुपर्‍यो भनेर पनि प्रस्ताव आएको थियो । पछि एउटा भेटमा भट्टले म संलग्न छैन भनेका थिए ।
यो खेलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतका दुई/तीन जना कर्मचारी छन् । (उनले थर बताए पनि बिर्सिएको बहानामा नाम खोलेनन्) । पछि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसम्म सहजीकरण गर्थे । विकलले मन्त्रीसँग नजिक भएर काम गर्‍यो । ऊ अमेरिकी ग्रिनकार्ड होल्डर हो । अन्तःशुल्कको स्टिकर छाप्दा पनि ऊ संलग्न थियो । एमआरपी छाप्ने भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा आएको हो । बदमासी गरेको थाहा पाएपछि टंकमणि शर्माले आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक हुँदा कारबाही गरेका थिए ।
छैन । मैले बारम्बार यो विषय लेखा समितिमा उठाउनुपर्‍यो भनेको थिएँ । मसँग अडियो रेकर्ड छ भन्ने थाहा पाएपछि मन्त्री केही सातायता अलि नरम भएका थिए । मेरोविरुद्ध बोले ५ मिनेटमा बाहिर ल्याइदिन्छु भनेको थिएँ । अरू सांसदलाई थाहा भए पनि कोही उनका विरुद्ध बोल्न सकेनन् ।